Iimpawu ze-6 Lixesha lokuTsala isoftware yakho yohlalutyo | Martech Zone
Isisombululo sesoftware esenziwe ngobuchule (BI) sibalulekile kuwo nawuphi na umbutho ofuna ukumisela i-ROI yemizamo yawo ekwi-Intanethi.
Nokuba kulandelwa iprojekthi, umkhankaso wentengiso ye-imeyile, okanye uqikelelo, inkampani ayinakho ukukhula ngaphandle kokulandela umkhondo wokukhula kunye nethuba ngokunika ingxelo. Isoftware yoHlaziyo iya kudla ixesha kunye nemali kuphela ukuba ayifaki zifoto ezichanekileyo zendlela elenza ngayo ishishini.
Jonga ezi zizathu zithandathu zokuwisa enye kubahlalutyi isoftware ngokuthanda eyenye esebenzayo.
1. Ukudibanisa ujongano lomsebenzisi
Phambi kokuzibophelela kwisoftware yeBI, kufuneka abasebenzi bakho bayivavanye kwaye babone ukuba ingaba umsebenzisi womsebenzisi unokudityaniswa ngokulula ekuhambeni komsebenzi. Unxibelelwano lomsebenzisi olunobunkunkqele lunokuyicothisa inkqubo yokunika ingxelo: abasebenzi kufuneka balandele indlela edibeneyo yokuhambisa iziphumo. Amaqela asebenza kunye nesoftware ye-BI kufuneka abe nenkqubo ecacileyo, engaguquguqukiyo ukuze iinzame zabantu zingadibani kwaye zichithe ixesha.
2. Idatha eninzi
Olunye usongelo kwizisombululo ezininzi zesoftware ye-BI kukuba le nkqubo ihambisa idatha eluhlaza kakhulu ngaphandle kokuyiguqulela kukuqonda okusebenzayo. Abaphathi kunye neenkokheli zeqela kufuneka zikhawuleze zikwazi ukwahlula iindawo ezisebenza kakuhle kwezo zifuna ukuhoywa. Bajongane nodonga lwamanani, abasebenzi banokuchitha ixesha elixabisekileyo benza iingxelo ezinokuqondwa.
3. "Isayizi enye ilingana nayo yonke"
Ayililo lonke ishishini eliqhuba ngokufanayo, kwaye umbutho ngamnye uneemetrikhi ezithile ezihambelana neemfuno zawo. Isoftware ye-BI kufuneka yenziwe ngokwezifiso, ke abaphathi banokucoca ingxolo kwaye bagxile kuyo uhlalutyo olubaluleke ngokwenene. Umzekelo, iinkampani ezibonelela ngeenkonzo azidingi kuvavanya ukulinganisa kunye nokuthengwa, ukuba balawula nayiphi na into ebonakalayo. Uhlalutyo kufuneka lulingane namasebe kusetyenziswa idatha.
Njengoko iinkampani zikhangela inkqubo efanelekileyo ye-BI, kufuneka bayiphephe kubahlalutyi izixhobo ezijolise kakhulu. Ngelixa inkqubo yokunika ingxelo inokugqwesa kwimetriki yokusebenza komqeshwa, kunokuba kubi ekusingatheni ezinye iinkqubo zokusebenza. Iinkampani kufuneka zenze uphando olubanzi kwizisombululo ze-BI ukuqinisekisa ukuba isoftware ayizityesheli iindawo eziqinisekileyo ukuba zihlolisiswe.
5. Ukungabikho kohlaziyo
Abaphuhlisi besoftware abanokuthenjwa bahlala behlaziya uhlaziyo kufutshane, njengokulungiswa kwezokhuseleko, i-OS uhlaziyo lokuhambelana, kunye nokulungiswa kwe-bug. Umqondiso ophambili wehlwempu kubahlalutyi Inkqubo kukusilela kohlaziyo, oko kuthetha ukuba abaphuhlisi besoftware abayilungisi imveliso ukuze bahlangabezane neemfuno zeshishini eziguqukayo.
Xa uhlaziyo lwesoftware lukhutshwa, kufuneka luqinise ukhuseleko ngokuchasene nosongelo olutsha lwedijithali, kwaye ugcine idatha yenkampani ikhuselekile. Uhlaziyo ngokubanzi luphucula ukuhamba komsebenzi, vumela abasebenzi ukuba bavelise iingxelo ngokukhawuleza, kwaye bavelise ulwazi olufanelekileyo ngakumbi. Kuya kufuneka ujonge iiwebhusayithi zesoftware ukuze ubone ukuba imveliso yabo ihlaziywa kangaphi kwaye ufumane umbono wokuba isisombululo sangoku sithini.
Iinkampani zixhomekeke kwisisombululo sesoftware, kubandakanya Iinkcukacha zolwazi zeCRM, Iinkqubo ze-POS, kunye nesoftware yolawulo lweprojekthi. Ukuba i kubahlalutyi Isisombululo asinakudityaniswa kwimeko yakho yobuchwephesha, uya kuchitha ixesha uzama ukuzisa idatha ngaphezulu kwezinye iinkqubo.
Iinkampani kufuneka ziqiniseke ukuba isisombululo se-BI sidibana kakuhle nezixhobo zazo ezikhoyo, iinkqubo zokusebenza, kunye neenkqubo zesoftware.
Njengoko iinkampani ziqhelana nexesha ledijithali ngokulungelelanisa iinkqubo ukuya kwisantya esiphezulu, amashishini anokuhlala ekhuphisana ngokuchanekileyo Isisombululo seBI. Ukuba iimethrikhi zakho zangoku ziphelelwe lixesha, zinobudenge, zilinganiswe ngedatha engaphandle, okanye ngokungaqondakaliyo, lixesha lokuba utshintshele kwisisombululo esingcono.
Efanelekileyo kubahlalutyi Isisombululo sinokutyhala inkampani ngaphambi komdlalo, iwuvumele ukuba wamkele iinkqubo ezifanelekileyo, uphulukane neendlela ezingasebenziyo, kwaye uye kwi-ROI enkulu.
ShoutEm: IiNkqubo zeMfono kunye neeNkqubo zeMfono eziMhlophe